Sangano rekubatanidza rekutsvaga rekutsvaga kwekukura kwehomoni muThailand
Nzira yekubatanidza hurongwa hwehukama hwedu?
- Kutanga iwe unoda taura nesu Uye wobva watora wenzani
- Mushure mekunyora, iwe uchagamuchira kadhi yakakosha kune vatengi vako. Mushure mekutengeswa kwega kwega, unogamuchira kuraira kwako kubva kune mutengesi pamwe nemutengi
Sei ndichifanira kubatanidzwa purogiramu yemudzimai?
- Ita mari chaiyo pamwe chete nesu!
- Ita zvikomborero zvakakosha zvevashandisi pane zvigadzirwa zvedu
- Iva nehuwandu hwehuwandu
- Chiri kufunga? Join now!